Kitra Afrikanina : hatao any Mahajanga ny lalaon’ny Adema sy ny Cnaps | NewsMada
Araka ny angom-baovao, any amin’ny kianja Rabemananjara Mahajanga avokoa no hanatontosana ireo lalao iraisam-pirenena, hatrehin’ireo ekipa solontenan’i Madagasikara, amin’ny fifaninanana afrikanina. Ny Cnaps Sport, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka sy ny an’ny Adema, eo amin’ny amboaran’ny kaonfederasiona.
Anton’izany, ny tsy fahavitan’ny kianjaben’i Mahamasina ara-potoana. Raha tsiahivina, notrongisina ny bozaka ao aminy ary mbola haharitra ela vao ho tontosa ny fanoloana izany, izay hatao bozaka natoraly ihany fa tsy “synthètique” akory.
Kianja roa ankoatra an’i Mahamasina no tsy maintsy hanaovana safidy, handraisana ireo lalao iraisam-pirenena ireo, dia ny ao Fianarantsoa sy ny any Mahajanga. Tsy lany anefa ny ao Ampasambazaha, satria tsy mbola mahafeno ny fepetra rehetra ary tsy mbola nahazo ny fankatoavan’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa). Eo aloha, ny tsy fisian’ny fefy na “grille de protection”, manodidina ny kianja. Ny seranam-piaramanidina any an-toerana ihany koa tsy mahazaka “boeing”, izay hitondra ireo mpilalao vahiny. Tsy maintsy mandeha fiaramanidina mantsy ny ekipa avy any ivelany raha vao mihoatra ny 300 km ny toerana hanaovana ny fihaonana, araka ny lalàna iraisam-pirenena.
Mifanohitra amin’izany kosa ny any Mahajanga. Feno tanteraka ny fepetra hahazoany mampiantrano ireo lalao ireo. Efa nampiantrano fihaonana iraisam-pirenena maro ihany koa ny kianja Rabemananjara.
Tsiahivina fa eto Madagasikara avokoa ny hatao ny fihaonana miverina amin’ny lalao savaranonando, ka ny Cnaps Sport, handray ny Gor Mahia Kenya, ary ny Adema kosa hampiantrano ny Harare City. Ny 27 sy ny 28 febroary ny daty hanaovana ireo lalao roa ireo.